Burma Partnership » 88 Generation Students Visit Myin Chan, Speak to the People
By Burma Partnership • February 27, 2012
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြောင့် ကိုမင်းဇေယျ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုအောင်သူတို့မှ မြင်းခြံမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးတွင် ပြည်သူလူထုအား တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ရာ လူထုအင်အား ၃၀၀၀ ခန့် လာရောက်အားပေး ခဲ့ကြသည်။
၎င်းဟောပြောပွဲအခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓတ်ပုံများကို ဤနေရာတွင်နှိပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
88 Generation Students including Min Ko Naing, Min Zaya, Htay Kywe, Aung Thu visited Myin Chan, Mandalay Division and gave speeches about freedom from fear to the public at the NLD’s Myin Chan office yesterday at 5pm in the evening. A crowd of as many as 3,000 people greeted them.
Tags: 88 Generation Students, Burma Partnership, Burmese, Min Ko Naing